Ferrari: HowaBlacksmith Created Italy’s Premiere Sports Car Brand - MY - Stindx.com
Number of symbols: 12918
တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြို့ကြီး များတွင် သင်အလွယ်တကူ ၇ှာနိုင်သော အရာ သည် ကားများပင်ဖြစ်သည်။ ကားများသည် မျက်မောက်ခေတ်တွင် အရိုးစွဲ သော အရေးပါသော အရာတစ်ခုဖြစ်လာကာ ၄င်းတို့မ၇ှိပဲ နေထိုင်ဖို့ ဖြစ်လာသည်အထိဖြစ်လာကာ အထူးသဖြင့် နေ့စဉ်သွားရသောနေရာသည် ဆိုင်ငယ်ဖြင့်သွားရသောခရီးထက်ဝေးနေသည့်အခါမျိုးတွက်ပိုမို အရေးပါပါသည်။ ပုံစ့အမျိုးမျိုးနှင့် ကားအမြောက်အများရှိသော်လဲ ကားတွေကို သာမန်ကားတွေနှင့်ပြိုင်ကားတွေဆိုပြီးနှစ်မျိုးအမျိုးအစားခွဲနိုင်သည်။ ၄င်းတို့သည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ ပြိုင်ကားတွေဟာလူတော်တော်များများနှင့် အလှမ်းကွာလှသည်။ ကားရဲ့ အကြောင်းအချက်များကို ကျမ်းစာ ပိုဒ်တွေကို ရွတ်သလို ရွတ်နိုင်သော ပြိုင်ကား တွေကို ရူးသွပ်သူများအကြောင်ကို ပြောပြမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ကားတွေနှင့်ပတ်သတ်၍သင်နှစ်သက်လျင်နှစ်သက်မည်။သို့မဟုတ်သင်နှစ်သက်ချင်မှလဲနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ဒီတစ်ပတ် ဗီဒီယို သည် ဒုတိယလူအုပ်စုအတွက်ဖြစ်ပြီး အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမအချက်က ပြိုင်ကားတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာ ကို ခံစားရန် ပြိုင်ကားဝါသနာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေဖို့ မလိုအပ်သလို ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် ပြိုင်ကားကို အချိန် အတော်ကြာလေ့လာခဲ့သူတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ဖို့ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်
ထိုအကြောင်းအချက်များကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ ဒီအပတ် Behind the Business အစီအစဉ် ရဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ အီတလီနိုင်ငန်၏ ပထဆုံးပြိုင်ကားကုမ္မဏီ ဖာရာရီ ပြိုင်ကားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀ရာစု အစောပိုင်းကာလတွင် ကားတွေကို စတင်တည်ထွင်ဖို့နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်သည်။ မြို့ပြဒေသတွေမှာ လမ်းတွေ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကို တည်ဆောက်နေကြစဉ်မှာ နယ်ဖက်တွေတွင် ကားတွေသည် မြင်ရခဲသော အရာတွေအဖြစ်ရှိနေကြဆဲဖြစ်သည်။ အီတလီမြောက်ဖက်ပိုင်းတွင်လည်းထို့နည်းတူစွာဖြစ်သည် အီတလီ ကားလုပ်ငန်း၏ အစတွင် အကုန်လုံးနီးပါးသည် ပြည်တွင်း လုပ်ငန်သေးလေးများသာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရဲ့ ကားထုပ်လုပ်ရေးများသည် ပြည်တွင်းအင်ဂျင်နီယာများ၏ အလုပ်ရုံလေးများသာဖြစ်သည်။ ထို အလုပ်ရုံ လေးများထဲမှတစ်ခုသည် အီတလီမြောက်ပိုင်း Emilia-Romagna ဒေသရှိ Modena မြို့ အစွန် ရှိ Alfredo Ferrari ၏ အလုပ်ရုံ လေးသည် လဲ အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Alfredo သည် အဓိကအာဒဖြင့် သတ္ထုလုပ်သာဒဖြစ်သော်လဲ သူသည် ကားပိုင်ပြီး ကားအလုပ်လုပ်ပုံကိုသိသောအခါ ကားပြင်ခြင်းကိုပါ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Alfrado သည် များသော အားဖြင့် သူ၏သား Enzo ကို သူ့အားကူညီရန် ခေါ်ခဲ့ပြီး
ကားမည်သို့ မောင်းနှင်ရမည် ကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ Enzo ၏ ငယ်ဘ၀ ရည်မှန်းချက်မှာ ပြိုင်ကားမောင်းသူတစ်ရောက်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပြီး ထိုအရာကို မကြိုးပမ်းရသေးခင်မှာပဲ ပထမကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သူ၏ ဖခင် နှင့် အကိုတို့ သည် အီတလီစစ်တပ်သို့ ဝင်ရောက်သွားခု့သည်။ ၁၉၁၆ ခုနှစ်တွင် တုပ်ကွေးကူးစက်ခံရပြီး သူ၏အကို နှင့် ဖခင်သည် သေဆုံးခဲ့ပြီမိသားစု စီးပွားရေးသည် လည်း သူတို့နှင့်အတူသေဆုံးခဲ့လေသည်။ နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင် Enzo သည်လည်း စစ်တပ်၏ ပန်းပဲ တပ်အတွက် အခေါ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် သူ၏ ကျန်းမာရေးမကောင်းမှုကြောင့် ၁၉၁၈ ခုနှစ် တွင် ပြန်လည်ထုပ်ခံရပြီး တစ်နှစ်လောက်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကာ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေသော enzo သည် တူရင်နှင့် မီလန်သို့ ပြေးဆွဲနေသော စစ်တပ်ရဲ့ ကားဟောင်းများကို ပြန်လည် အသုံးပြုသော ကားများကိုမောင်းနှုင်ခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာ များအတွက်ကတော့ ကတော့ ကားအဟောင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး ဈေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောင်ချရန်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင် Enzo သည် အင်ဂျင်နီယာ နှင့် ပြိုင်ကားသမားဟောင်း အမြောက်အများနှင့်တွေ့ ခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်ထိုသူတို့သည် Enzo ဖြစ်ချင်သော ကားသမားဖြစ်လာစေရန် အခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။ Enzo ၏ ပထမဆုံး ပြိုင်ပွဲ သည်၁၉၁၉ အောက်တိုဘာလတွင်ဖြစ်ပြီး Parma Poggio di Bercento အမည်ရ တောင်တက်ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါသည်။ထိုပွဲတွင် Enzo သည် စတုတ္ထရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၀ တွင် သူသည် Alfa Romeo အတွက် မောင်းနှင်ပေးခဲ့ပြီး
၁၉၂၃ တွင် Revenna မှ Circuito del Savio ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမရဗိုလ်ဆွဲခဲ့သည်။ှSavio ပြိုင်ကွင်းသည် ထိုအချိန်က Italy တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်သော ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Enzo ၏ အောင်မြင်မှုသည် အံသြစရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲကို ထောက်ပံသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် မြို့စား Enrico Baracca သည် Enzo ၏ ကားမောင်း စွမ်းရည် ကို သဘောကျပြီး သူ၏ အိမ်သို့အလည်ခေါ်ခဲ့သည်။ ထိုတွင် မြို့စားကြီး၏ အမျိုးသမီးသည် ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ ရသော သူ၏ သားအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့သည်။ ၄င်းသည် အီတလီ၏ လေသူရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမည်မှာ Francesco Baracca ဖြစ်သည်။ င်္Francesco သည် လေကြောင်းတိုက်ပွဲ ၃၄ ပွဲ ကို အောင်နိုင်ပြီး စစ်ထဲတွင် အခြား အီတလီ လေသူရဲများထက် အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရှိခဲ့သည်။ သူ၏လေယာဉ်ပျံကို အဖြူခံပေါ်တွင် မြူးတူးခုန်ပေါက်နေသွေှာအနက်ရောင်မြင်းပုံဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ မြို့စားကတော်သည် Enzo ၏ ကားမောင်းစွမ်းရည်ကို သဘောကျပြီး သူ့ သား ၏ အမှတ်တဆိပ်ကို Enzo သို့ပေးခဲု့သည်။ သူသည် ပြိုင်ပွဲ တစ်ဒါစင်လောက်အနိုင်ရပြီးနောက် Scuderia Ferari အမည်ဖြင့်ကိုယ်ပိုင် ကားမောင်အဖွဲကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၄င်း အသင်းသည် Alfa Romeo အတွက် ဆယ်နှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည်။ ဒီနေရာမှ စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးအချက်မှာ Ferrari သည် ပန်းပဲ ဟု ဝေါဟာရသမိုင်းတွင် အဓိပါယ်ရပြီး အီတလီနိုင်ငံ၏ အသုံးအများဆုံး မိသားစုအမည်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
Enzo သည် အသင်း၏တံဆိပ်အတွက် cavallino rampante ဟုခေါ်သောမြင်းရုပ်ကိုေ၇ွးချယ်ကာ အဖြူနောက်ခံကို Modena မြို့၏အရောင် အ၀ါရောင်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Enzo သည် အရည်အချင်းရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်က အကောင်းဆုံး ကားမောင်းသမားများကို ဆွဲဆာင်ခဲ့သည်။ ဂန္တ၀င်များဖြစ်ကျသော Tazio Nuvolari နှင့် Giuseppe Campari တို့သည် Enzo ၏ အသင်းကို ပြိုင်ပွဲမြောက်မြားစွာကို အနိုင်ရအောင်ကူညီပေးနိုင်ကြသည်။ ထိုအောင်မြင်မှုများထဲမှ အောင်မြင်မှုအချို့မှာ Targa Florio Le Mans ၂၄နာရီပြိုင်ပွဲ Grands Prix ပြိုင်ပွဲ တစ်ဒါဇင်လောက်တို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၃၈တွင် Alfa Romeo သည် သူတို့ကိုယ်ပိုင် အသင်းတစ်ခုထူထောင်ရန် Scuderia Ferrari နှင့်လမ်းခွဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် enzo သည် အသင်းသစ်၏ မန်နေဂျာ အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်နှစ်လောက်အကြာတွင် သူ၏ကိုယ်ပိုင် အသင်း Auto Avio Costruzioni ကို တည်ထောင်ရန် Alfa Romeo မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ Enzo ၏ ထွက်ခွာခြင်းသည် ကြီးမားသော ပြသနာကိုဖြစ်စေခဲ့ပြီး စည်းကမ်းချက်များအရ သူသည် Alfa Romeo ၏ အဖွဲ့အသစ်နှင့် လေးနှစ်စလုံးယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကာလများတွင် Enzo ၏ ကုမ္မဏီသည် စက်ပစ္စည်းများနှင့် လေယာဉ် ပစ္စည်းများကို Mussolini ၏ ဖက်ဆစ်အစိုးရအတွက်ထုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၀ အရောက်တွင် enzo သည် သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ပြိုင်ကား AAC 815 ကို
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ၄လ အတွင်းမှာပဲ Enzo သည် ထိုကားနှစ်စီးကို ထုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် ၄င်းတို့ထဲမှတစ်စီးသာကျန်တော့ပြီး ၄င်းသည် Righini ဟုအမည်ရသော Private ကားစုဆောင်းမှု တစ်ခုဖြစ်ကာ Modena မြို့ အပြင်ဖက် ရှိ ၁၅ ရာစု နနိးတော်တွင်းတည်ရှိသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ရန်နီးကပ်လာချိန်တွင် မဟာမိတ် များသည် Enzo ၏ စက်ရုံကို ဗုံးကြဲခဲ့သော်လည်း ၁၉၄၆ တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ကာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင် Enzo သည် Ferrari 125 ကို ထုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၄င်းသည် Ferrari အမည်အောက်တွင် ပထမဆုံးပြိုင်သော ပြိုင်ကားဖြစ်လာသည်။ 815 နှင့်မတူသောအချက်မှာ ဆလင်ဒါ ရှစ်လုံးပါသော အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ Enzo သည် သူ၏ အင်ဂျင်နီယာများကို တစ်ဖက်စီတွင် ဆလင်ဒါ ၆လုံးစီပါသော V ပုံစံ အင်၈ျင်ကိုတီထွင်စေသည်။ ထို V12 အမည် ရအင်ဂျင် သည် Ferrari ၏ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီး ထုပ်လုပ်သော ကားအတော်များများတွင် အသုံးပြုသော အင်ဂျင်ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၄၈ တွင် enzo သည် 125 S ပြီးနောက် Ferrari 166 ကို ထုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၄င်းသည် ကုမ္မဏီ၏ ပထမဆုံးသော် နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသော ကားဖြစ်လာခဲ့သည်။ Ferrari ၏ ပထမဆုံးအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုမှာ Alberto Ascari က Ferrari Tipo 500 ကို မေမာင်းနှင်ပြီး
၁၉၅၂ Drivers` Champion ကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Ascari သည် သူ၏နောက်တစ်ကြိမ်အဖြစ် ရယူခဲ့ပြီး တစ်ယောက်ထဲ့နဲ့ဆုဆက်တိုက်ရသူဖြစ်လာသည်။ ထို့နောက် Formula One သည် ကားမောင်းသူတွေအတွက်ရော တည်ဆောက်သူတွေအတွက်ပါ ဆုနှစ်ခုပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောပ် GrandPrix မှာ အသင်းတစ်သင်းသည် အနည်းဆုံးကား ၂စင်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ကားသမား လေးယောက်ရှိရမည်ဖြစ်ကာ တစ်ယောက်ခြင်းစီသည် ပြိုင်ပြွဲပြီးချိနန်တွင် အသင်းအတွက်ရော ကိုယ်တိုင်အတွက်ပါအမှတ်ရလေသည်။ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင် ပထမ ဆုံး၁၀ယောက်သာအမှတ်ရပြီး အမှတ်အများဆုံးရသူသည် Driver Championship ကိုရရှိသည်. ထိုနည်းတူစွာ Constructors` Championship ကိုလည်းထိုသို့ပင်သတ်မှတ်သည်။ သို့သော် အသင်းတစ်သင်းတွင် ကစားသမားအများအပြားရှိသောကြောင့်း ထိုဆုနှစ်ခုသည် အမြဲတမ်းတော့ထပ်တူမကျပေ ၁၉၅၇ တွင် Ferrari 250 Testa Rossa ကိုထုပ်လုပ်ပြီးအောင်မြင်မှုကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ထိုကားသည် ၁၉၅၈ ၁၉၆၀ နှင့် ၁၉၆၁ တို့တွင် ဆုသုံးခုရယူပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ အစသည် Ferrari အတွက် အလွန်ခက်ခဲ့သောကာလဖြစ်ခဲ့သည် မြောက်မြားစွာသော သက်တမ်းရင့် အလုပ်သမားများက Enzo ၏ သူ၏မိန်းမ Laura ကို မန်နေဂျာခန့်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ Laura သည် စကားပြောဆိုးသူဖြစ်ပြီး ကိစ္စတိုင်းတွင်လည်းပါတတ်သူဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Ferrari ၏ အရောင်းမန်နေဂျာ Girolamo Gardini သည် အခြားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၈ ရောက်နှင့်အတူ Laura ၏ အလုပ်ထွက်ရေးအတွက် စာတင်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ Girolamo ၏ တိုက်ရိုက်အရေးဆိုမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပဲ စာတင်သော သူ အားလုံးအလုပ်ထုပ်ခံခဲ့ရသည်။ ၄င်းသည် Ferrari အတွက် အကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ခြ့ပြီး အလုပ်သမားဆန္ဒပြပွဲကိုဖြစ်စေသည်။ ၄င်းသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်ငဖြစ်ပွားခဲ့သော ကားသမား၎ ဦးသေဆုံးမှုလောက်မဆိုးဝါးခဲ့ပေ။ Ferrari ၏ ထုပ်လုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများအားလုံးရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပြီး ၄နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့ရသည်။
အလုပ်သမား သပိတ်သည် Ferrari အတွက် အလွန်ဆိုးရွားသော်လည်း အကောင်းရှေ့က အဆိုးဖြစ်တာလို့ယူဆနိုင်ပါသည် Enzo သည် ထိုအလုပ်သမားဟောင်းများနေရာတွင် လူငယ်များကိုခန့်အပ်သည်။ ထို အသစ်တွေက Ferrari 250 GTO ကို ထုပ်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ ထို ကားတွေကိ Ferrari က ၃၉ စင်းသာ ထုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် အစင်း ၁၀၀ အနည်းဆုံးထုပ်လုပ်ရန်လိုသည်။ Enzo သည် ကားတွေမှာ အစဉ်လိုက် မဟုတ်သော နံပါတ်တွေတပ်ပြီး လာရောက်စစ်ဆေးသောအခါထိုကားတွေကို တစ်နေရာစီထားကာ လှည့်စားခဲ့သည်။ ထို့နောက် 250 GTOကို ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးသုံးနှစ်ဆက် World Sportscar Championship ကို ရရှိခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသော 250 အနည်းငယ်သည် အခုအချိန်တွင် အလွန်အမင်းဈေးကြီးနေပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ တွင် ထိုကားကို ၃၈ မီလီယမ် ဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များသည် Ferrrari အတွက် အကောင်းဆုံးဆယ်စုနှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး
သူတို့သည် Ferrari 275 နှင့်Ferrari Daytona ကို ဆက်တိုက်ထုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၆၀ အကျော်တွင် enzo မှီအောင်မဆောက်လုပ်နိုင်လောက်အောင်ကို ၀ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ကုပ္မဏီတိုးခြဲ့ရန် Fiat ကို ရှယ်ယာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းရောင်းချခဲ့ပြီး အခုအချိန်၏ အကြီးမားဆုံး ကားထုပ်လုပ်သူဖြစ်လာသည်။ ထိုအသစ်ရလာသော ငွေတွေကို Ferrrari ၏ တိုးခြဲ့မှုမှာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး သူ အနည်းငယ် သာသိသောကိစ္စတွေကိုပါစတင်ရန်ြိကူးပမ်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဈေးနဲသော ပြိုင်ကားတွေထုပ်လုပ်ကာ လူများကြီး ကို ရောင်းရန်စိစဉ်သည်။ သူသည် သူ၏ကားကို ဇိမ်ခံပစစည်းအဖြစ်မမြင်စေလိုပဲ သူ၏သား Alfredo ကို ဂုဏ်ပြုထားသော Dino အမည်ရှိကားကိုထုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ Alfredo သည် ထို ကားမထုပ်မီ ၁၀ နှစ်လောက်ကသေဆုံးခဲ့ပြီး ကြွက်သားတွေကိုဖြတ်ဆီးသော ရောဂါဖြင့်သေဆုံးခဲ့သည်။
သူသည် V6 အင်၈ျင်ကို တီထွင်နေစဉ်ကာလ Alfredo ၂၅ နှစ်သည် သေဆုံးခဲ့သည်။ Enzo သည် အလွန်အမင်းထျခိုက်ခဲ့ပြီး Dino ကို၁၉၇၆ ထိ မော်ဒယ် သုံးမျိုးထိရရှိခဲ့သည်။ 206 GT 246 GT တို့ကို V6 အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး Alfredo ထုပ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကာ 308 GT4 ကို တော့ပိုကောင်းသော V8 ကို တပ်ဆင်ထားသ်ည။ ၁၉၇၀ wတွင် Ferrari သည် Drivers` Championships သုံးခုကို Niki Lauda နှင့် Jody Scheckter တို့ကြောင့်ရရှိခဲ့ပြီး နောက်နှစ် ၂၀ အထိ ထပ်မံရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ပိုဆိုသွာံးတာက ၁၉၈၂ Belgian Grand Prix တွင် Gilles Villeneuve သေဆုံးမှုဖြစ်သည်။ ထိုအချိနိတွက် Gilles သည် အအောင်မြင်ဆုံး ကစားသမားဖြစ်သော ကြောင့် တစ်လောကလုံးကို တုန်လှုပ်သွားစေသည်။ ၁၉၈၄ တွင် Testarossa ကို ထုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ က Testa rossa ကို တွဲရေးပြီး ထပ်မံထုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အံသြစရာကောင်းတာက Testarossa က ပြိုင်ကွင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိပေ
သို့သော် Ferrari ၏ အသိအမှတ်ခံရဆုံး ကာတွေထဲမှာ တစ်စင်းအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ပြီးနောက် Miami Vice တွင်ောနက်ဆုံး သုံးရာသီတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၇ တွင်Enzo သည် Ferrari F40 ကို နှစ် ၄၀ ပြည့်အဖြစ် ထုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်နှစ်တွင် Enzo ၏ သေဆုံးခြင်းသည် ထို မော်ဒယ်ကို သက်ရောက်စေသည်။ ခန့်မှန်းသူတွေက F40 ၏ ဈေးနှုန်းကို ၄ ဆလောက်မြင့်ခဲ့ပြီး အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Enzo နောက်ဆုံး အသိမှတ်ပြုထုပ်လုပ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀တွင် F40 ၏ အရောင်းတွင် ၁၀%နှုန်းလောက် သာ အမှန်တကယ်စီးနင်းဖို့အတွက် ၀ယ်ယူကြသည်။ Enzo ၏ သေဆုံးမှုသည် ကုပ္မဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေသည်။ Piero သည် တစ်ဥိးတည်းကျန်ရှိသော အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူဖြစ်ကာ ၅၀% သော အမွေရခဲ့သည်။ ထိုထဲက အတော်များများကို Fiat သို့ ထပ်မံ ရောင်းချခဲ့ပြီး Vice President ဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံတွင် Fiat က ၉၀ % ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀% သာ Piero ပိုင်တော့သည်။ Enzo ကွယ်လွန်ခဲ့သော်လည်း Ferreri ၏ပြိုင်ကားအသင်းသည် ပြန်လည်ဦးမော့လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၃ တွင် တချိန်၌ Ferrari ၏ CEOနှင့် International Automobile Federation၏ ဥက္ကဌ ဖြစ်လာမည် Jean Todt ကို General Manager အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင် Micheal Schumacher ကို ၁၉၉၆ တွင် အရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် ကြောက်ဖို့ကောင်းလောက်သော ပုံစံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ မှစ၍ ဆုတစ်ဆုမှ မရပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီး သူတို့၏ V12 အင်ဂျင်သည် လည်း အခြား V10တွေလောက်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့သည်။ Michael Schumacher၏ Ferrrari သိူ့ ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အလွန်အမင်း ထူးဆန်ဒခဲ့ပြီး Ferrari ဖက်ကလဲ နှစ်နှစ် စာကာလအတွက် ၆၀ မီလီယံကို ပေးချေခဲ့ရသည်။ ယနေ့ထိတိုင် Ferrari သည် ပြိုက်ဖက်တွေနှင့်ယဉ်ပြိုင်ကာ အကောင်းဆုံး ကားမောင်းများကို ရယူနေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ တွင် ဈေးအကြီးဆုံး ကစားသမားမှာ Ferrari ၏ Sebastian Vettle ၏ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို ၅၀ မီလီယမ်လောက်ရရှိသည်။ Schumacher ဆီပြန်သွားရအောင် ၁၉၉၆ တွင် ပြိုင်ပွဲသေးသုံးပွဲတွင်အနိုင်ရပြီး Drivers` Championship တွင် တတိယချိတ်ခဲ့သည်။ ထိုရလာဒ်သည် လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်အတွင်းအကောင်းဆုံးရလာဒ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ထိ Schumacher သည် သူ ၏ အကောင်းဆုံးပုံစံကို မပြနိုင်သေးပဲ
ထို့နောက် McLaren ၏ Mika Hakkinen ကို အနိုင်ရပြီးDrivers` Championship ကို နှစ် ၂၀ အတွင်းပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် နောက်ထပ် ၄ နှစ်ဆက် အနိုင်ရကာ အအောင်မြင်ဆုံးအဖြစ် Formula 1သမိုင်းတွင် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်။ ထို ကာလများကို သူ တစ်ယောက်ထဲ ကြီးစိုးချုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ တွင် ၅၈ မှတ်ဖြတ်ဦးဆောက်ကာ နောက်နှစ်တွင် ၆၇ ထိဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ Fernando Alonso ပေါ်လာသော ၂၀၀၅ တွင် Schumacher သည် နန်းချ ခံခဲ့ရသည် Fernando Alonso သည် Renault အတွက် ဆုနှစ်ဆုရယူပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်များသည် Ferrari ကို ကမ္ဘာ့ပြိုင်ကားစင်မြင့်သို့ပြန်လည် ပို့ဆောင်ခဲ့သော ကာလများဖြစ်သည်။ Schumacher ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များသည် Ferrari ကို ပြိုင်ပွဲနှစ်ခု လုံးမှာ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်စေခံသည် Ferrari ၏ မှတ်တမ်းပြုရာကားမှာ Ferrari enzo ဖြစ်ခဲ့သည်။ 2002 ခုနှစ်တွင်ထုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး V12 သုံးသော ပထမဆုံးကားဖြစ်လာခဲ့သည်။ F140 သည် အခြားသော ပုံစံတွေမှာလဲ အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည် ၂၀၁၃ တွင် ထုပ်လုပ်ခဲ့သော Laferrari သည် Ferrari ၏ နောက်ဆုံးပြိုင်ကားဖြစ်ပြီး
အလွန်ကို ကောင်းမွန်သေညကားဖြစ်သည်. ၁.၄ မီလီယမ် တန်ဖိုးရှိပြီး ၄၉၉ စင်းထုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက မှ အီတလီငလျင်သင့်ပြည်သူများကိုထောက်ပံရန် အစင်း၅၀၀ မြောက်ကို ထုပ် လုပ် ရန်ကြေညာခဲ့သည်။ Ferrari ၏ အစီအစဉ်ကို Fiat ကလည်း ကူညီမည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ဇန်န၀ါရီတွင် အများပိုင် ကုပ္မဏီ အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Ferrari ကြိုက်သူတွေအတွက် အံသြစရာကောင်းခဲ့သော်လည်း ထို အရွေ့သည် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ တွက်ချက်ပြီးဖြစ်သည်။ Ferrari သည် Fiat ၏ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် အသားကျပြီးဖြစ်၍ ယခုအပြောင်းအလဲသည် ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းအလဲမဖြစ်ခဲ့ါပေ။ Fiat ဖက် ကလဲထို အပြောင်းအလဲ တွင် Jeep နှင့် Alfa Romeo ကို ပြန်လည် သစ်ဆန်းရန် အရင်းအနှီးရခဲ့သည်။ Fiat ၏ ရှယ်ယာဈေးနှုန်းကို ကြည့်ပြီး ရင်းနှီးသူတွေမပျော်ရွှင်နိုင်သော်လည်း ထိုအပြောင်းအလဲသည် အောင်မြင်တယ် ကျရှုံးတယ် ပြောဖို့ခက်ခဲပါသေးတယ် Ferrari သည် နှစ် ၇၀ ပြည့်အတွက် 350 အထူးထုပ်ကို ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သူတို့သည် Laferrari မှလွဲ၍ အခြား မော်ဒယ် ၅မျိုးကို ထုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေပြီး ဒီနှစ်ကုန်တွင်ထုပ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဒါဟာ Ferrari ၏ သတင်းအကုန်မဟုတ်သော်လည်း Ferrari ၏ နှစ် ၇၀ ပြည့်သည် အောင်မြင်သော ကားထုပ်လုပ်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။